Ny vatolampy ao amin'ny ureter dia matetika antsoina hoe fananganana saline izay afaka mijanona amin'ny lalana avy amin'ny voa. Matetika izy ireo no mijanona any amin'ny toerana tery, indrindra rehefa miala avy eo amin'ny lakolosy. Ny fanatrehana izany fiofanana izany dia miteraka ny atrofa amin'ny fibarosok'aretina, ny famarotana ny tavy, izay miteraka aretina hafa, toy ny pyelonephritis, cystitis. Ny vato dia mety handratra ilay mpanefy, ka hampitombo ny toe-javatra. Aza manantena fa ho voavaha ilay olana, satria ny aretina dia tena matotra ary mitaky fitsaboana sahaza. Ilaina ny mahafantatra fampahalalana sasantsasany momba ny vato ao amin'ny ureter, sy ny soritr'aretin'izy ireo.
Antony mahatonga ny aretina
Zava-dehibe ny mahafantatra izay tena mahatonga ilay aretina, satria ny fampahalalana toy izany dia hanampy amin'ny fikarakarana ny fisorohana. Ny fotodrafitr'asa lehibe ho an'ny fanabeazana vato dia ahitana:
aretina amin'ny voa, bladder;
Olana amin'ny tetezan'ny gastrointestinal, ny taolana, ary koa ny rafitra endocrine;
ny tsy fetezana amin'ny rafitry ny rafitra urine;
tsy ampy fangalarana;
Maro be ny sakafo matsiro sy mahandro ao amin'ny sakafo.
Na izany aza dia ilaina ny mandinika, fa ny laharam-piainana dia tsy mitana anjara toerana farany.
Famantarana ny vato ao amin'ny mpitsimoka
Ny aretin-tsaina lehibe indrindra amin'ny aretina dia ny kolikoly, izay matetika no miaraka amin'ny riandrano, ny tazo mahery. Ny fanaintainana dia manomboka eo amin'ny farany ambany, ary miditra amin'ny sisiny sy ny tendrony. Ny soritr'aretin'ny vato ao amin'ny ureter dia ahitana ny fahatsapan'ny vehivavy ny fanaintainana ao amin'ny labia, sy amin'ny lehilahy ao amin'ny testicles. Manomboka tampoka ny kôlika ary afaka maharitra mandritra ny ora maro, raha fatoriana sy fanavaozana. Amin'ny ankapobeny, mitovy ny soritr'aretina sy ny fitsaboana vato ao amin'ny mpangataka amin'ny vehivavy sy ny lehilahy. Ny fieritreretana iray hafa momba ny aretina dia tokony hanosika ireto soritr'aretina manaraka ireto:
faniriana matetika ny handratra;
ra amin'ny urine;
Indraindray dia mitranga amin'ny vatany ny vato avy amin'ny mpandoko, miaraka amin'ny soritr'aretina rehetra. Saingy aza miandry izany, fa tsara kokoa ny mikaroka fanampiana ara-pitsaboana, raha tratran'ny kôlôjia matanjaka, dia ilaina ny miantso fiara mpamonjy voina.
Fanalan-jaza - famaranana ny fitondrana vohoka
Aorian'ny firaisana dia malemy ny kibo ambany
Aiza ny hyma?
Atsofohy eo amin'ny tratra
Cystitis amin'ny ra
Misoprostol sy Mifepristone
Ny endometriozy ny ovaire - ny soritr'aretina sy ny fitsaboana
Sakafo ho an'ny fikarakarana "Oreshkov" miaraka amin'ny ronono voapoizina
Voankazo masira Kefir
Inona no tsy afaka mamahana ny bitro?
Lindsay Lohan miampanga an'i Yegor Tarabasov ho vonoina
Marika ho fampakaram-bady ho an'ireo tsy manambady
Ny fahatsapana ny fitsirihana ny fitondrana vohoka
Seborrheic dermatitis - fitsaboana
Quizai no hany panda maitso eto amin'izao tontolo izao!
Famenon'ny vokatra miaraka amin'ny votoatin'ny kalôria
Taom-pandehan'ny Taombaovao - 35 hevitra tsara momba ny fankalazana ny Taom-baovao
Sakafo ao Khrushchev - hevitra momba ny famolavolana
Latabatra misy hosoka
Ahoana no hianaranao hanoratra tsara tarehy?
Ny rapper Kanye West dia tsy miaraka amin'ny rafozan-janany Chris Jenner
Aglaonema mena - olana amin'ny fakany